Manchester city oo la wareegtay hogaanka horyaalka, kadib markii ay ka talabsatay Everton. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Manchester city oo la wareegtay hogaanka horyaalka, kadib markii ay ka talabsatay Everton.
By admin on 07/02/2019 No Comment
Khamiis, Feberaayo, 07, 2019 (HNN)- Manchester city ayaa dhagta dhiiga u dartay kooxda Everton oo lagu ciyarayey garoonkeeda , dheesha ayaa ku soo dhamaatay 2-0 oo u sahashay in Man city ay la wareegaan hogaanka horyaalka premier league .
Bilowgii hore ee ciyaarta ayaa ku bilowday dar dar xoogan oo labada dhinac ah , ciyaartoyda labada dhinac ayaana sameeyey isku dayo badan oo aan guuleysan walow ugu dambeen Man city ay heshay gool dhamaadkii qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Daafaca birta ah Laporte oo u dhashay xulka Farnce ayaa dhaliyey gool madax ahaa oo uu caawintiisa lahaa Devid silva waqtii dheeriga ee lagu daray qeebtii koobaad ee dheesha .
Nasiino ka dib waxaa dib loo baastay ciyaarta , kooxdii martida loo aha ee Everton ayaana dadaal ugashay sidii ay iska masaxi laheed goolka shabaqeeda ka dhashay balse ugu dambeen wey ku hungobeen in ay iska soo argudaan .
Weeraryahanka dheereeya ee reer Barazil Jesus oo badal ku suu galay ciyaarta ayaa dhaliyey goolkii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 90-aad ee qeebtii dambe , goolkaas ayaa dilay rajadii ay Everton ay ka qabtay in ay garbo siman ciyaarta ka dhigaan .
Manchester city oo ah kooxda difaacaneysa horyaalka premier league ayaa ku dhibca noqotay kooxda Liverpool balse farqi goolal kaga sareen doonta jadwalka horyaalka xili ay xusid mudantahay in city kulan dheeri ah ay caawa ciyaartay.
Manchester city oo la wareegtay hogaanka horyaalka, kadib markii ay ka talabsatay Everton. added by admin on 07/02/2019